Mara mma oyiri na abụọ repaints na omenala ụda, elu àgwà nlereanya ibudata ugbu a!
Vickers VC10 bụ airliner ogologo nso British e mere na wuru Vickers-Armstrong (Aircraft) Ltd, ya mbụ ụgbọ elu na-anọ Brooklands na Surrey na 1962. Na ụgbọ elu e mere na-arụ ọrụ na ụzọ gasị aba anya na subsonic ọsọ na ịbụ ndị ruru eru nke tara akpụ arụmọrụ na elu elu si African ọdụ ụgbọelu. The mbụ echiche nke VC10 bụ iji nye ụgbọelu kwadoro site na a chernobyl na ike comfortably enweta mkpumkpu runways ọtụtụ ndị na-eji n'oge ahụ. The arụmọrụ nke VC10 bụ ndị dị otú ahụ nke na ọ ruru ndị kasị ịgafe nke Atlantic (London na New York), a ndekọ ka ji na-ụbọchị a subsonic ugbo elu, naanị ndị bụ Concorde bụ ngwa ngwa.
The VC10 a na-tụnyere ndị Ilyushin Il-62 (USSR), abụọ airliners bụ naanị anọ engine nhazi na a azụ. Na July 2012, 8 VC10-anọgide na ọrụ dị ka efe n'elu na refueling ugbo elu na Royal Air Force, atụmatụ ezumike nká na March 2013